FAQs - Beijing hadlin Technology Co., Ltd
Eeg Cadaadis Digital
SPMK700 Cadaadis eeg
Calibrator Cadaadis Intelligent
SPMK223 Cadaadis Calibrator
Cadaadis saar Comparator
Calibrator Heerkulka ...
SPMK313A Heerkulka ...
SPMK313B Heerkulka ...
51X habka calibrator
SDP module cadaadis
Adabtarada Cadaadis SPMK2000-1
Waa maxay dhaqmaan qalab iyo waxa aanu samaynaa?
dhaqmaan qalab waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan loo isticmaalo si ay u ilaaliyaan sax qalab. Dhaqmaan waa hab ka mid ah configuring qalab si ay u bixiyaan natiijo tusaale ahaan gudahood kala duwan oo la aqbali karo. Baabi'inta ama yareeyo arrimo keeni cabir sax ahayn waa arrin aasaasi ah design instrumentation.
Our Mission waa siinta cadaadis tayo sare leh iyo calibrator heerkulka si users.We waa soo saaraha xirfadeed ee cadaadiska iyo heerkulka qalab dhaqmaan 17 sano waayo-aragnimo ee Shiinaha.
Aqbalayno bixinta 100% TT ka hor.
Waa maxay xisaab bangi si aad u kala iibsiga bangiga?
Faa'iideystaha Magaca: Beijing hadlin Technology Co., Ltd
Bank faa'iideystaha ee: Warshadaha iyo Ganacsiga Bank of China Beijing Qinghe Town Sub-laan
CODE deg deg ah: ICBKCNBJBJM
Ma waxaad tahay qof soo saaraha ah ee instument dhaqmaan ama shirkad ganacsi?
Beijing hadlin Technology Co., Ltd waa soo saaraha xirfadle oo ah alaabta cadaadis iyo dhaqmaan heerkulka ee China.We waxaa la aasaasay sanadkii 1998-kii oo la caasimada ah registerd ah 33.8 milyan oo Yuan.
Doontaa in aad la bixinta shahaadada dhaqmaan oo ay la socdaan qalabka?
Caadi ahaan ma jiraan wax shahaado dhaqmaan bixinta.
Haddii aad u baahan tahay shahaadada dhaqmaan xisbiga 3rd sida Beijing Cabbiraad iyo Institute dhaqmaan, waxaa jiri doona kharash dheeraad ah ee USD130.0.
Waayo, SPMK700 eeg cadaadis digital, ku siin karaan 0.05% sax FS in ka badan 1000bar?
Waayo, kala duwan oo cadaadis ah 1000bar ama kor ku xusan, waxaan ku siin karaan 0.1% sax sida max.
Haddii aad u baahan tahay 0.05% FS ama saxnimada sare ee 1000bar iyo wixii ka sareeya, qiimaha uu noqon doono in ka badan USD6500.0.Because wax of shidma cadaadiska waa mid aad u qaali ah, oo waa ka duwan yahay sida wax aan la isticmaalayo. Qeybiyaha No siin karaan 0.05% FS at 1000bar ama kor qiimo yar yahay sida.
Wixii ugu kala duwan oo cadaadis ka yar 1000bar, waxaan ku siin kara 0,025% FS, 0.05% FS sidoo kale. Fadlan kala duwan oo cadaadis iyo saxsanaanta aad u baahan tahay, waxaan soo qaadan oo aad markaas qiimaha.